प्रेमको स्पष्ट परिभाषा, आखिर किन हुन्छ प्रेम ? Valentines Day Special – tvNepali.net
संसारमा सबभन्दा बढी परिभाषा गरेर पनि परिभाषित हुन नसकेको शब्द सायद ‘प्रेम’ होला । प्रेमको सार कुनै कुराप्रतिको आकर्षण मात्रै हो कि अरू केही पनि हो, यो प्रश्न बडो जटिल छ मेरो लागि । प्रेम मानिस-मानिसको बीचमा मात्र नभएर मानिस र चराचुरुङ्गीदेखि सबै प्रकारका जन्तु जनावर बीचमा रहेको देखिन्छ ।
तपाईँ कुकुरलाई औधि माया गर्न सक्नुहुन्छ, बिरालो तपाईँको प्रिय रहेको होला, वा तपाईँको घरमा सुगा, मैना वा कुनै सुन्दर चरा होलान् । प्रेम किन हुन्छ र यसलाई कसरि थाहापाउन सकिन्छ ? किन मानिसहरु प्रेमको लागी यति धेरै मरिहत्ते गर्ने गर्दछन ? यी सबै कुरा थाहापाउनको लागी भिडियो हेरनुहोस :
PreviousPrevious post:आफूले मन पराएको केटीले आफूलाई मन पराउँछिन् वा पराउदिनन् ? यसरी जान्नुहोस्
Next Next post:सर्पको जिब्रो किन बिचमा फाटेको हुन्छ ? यस्तो छ यसको जिब्रोको रहस्य